Milan Ghimire calendar_today १२ असार २०७६, 1:01 pm
रामेछाप,असार,१२ मिलन बि.क
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा उत्तीर्ण हुनु भएको छ । उहाँ ‘बी’ ग्रेडमा उत्तीर्ण हुनु भएको हो । उहाँले २.६५ जीपीए ल्याउनु भएको छ । उहाँले गएको चैतमा भएको परीक्षा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ मा रहेको मावि सेन्टर तुलसीपुरबाट दिनु भएको थियो ।
उहाँकी छोरी विनु पनि एसईईमा उत्तीर्ण हुनु भएको छ । विनुले काठमाण्डौस्थित बसुन्धराबाट परीक्षा दिनु भएको थियो । २०७३ सालमा मावि डाँडागाउँमा कक्षा आठमा भर्ना भएपछि शान्ताको औपचारिक पढाइ सुरु भएको हो ।
यस्तै एसईई परीक्षामा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर ३ जीपीए नम्बरसहित उत्तीर्ण भएकी छिन् । मानन्धर बी प्लस ग्रेडमा उत्तीर्ण भएकी हुन् । अभिनेत्री मानन्धरले एसईईको तयारीका लागि विध्यालयमा भर्ना भएर नियमित कक्षा समेत लिएकी थिइन् । उनी त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना भएकी थिइन् । त्यसै विद्यालयबाट उनले एसईईको तयारी गरेकी थिइन् ।
करिष्माले कक्षा ७ पढ्दापढ्दै पढाइ बीचैमा छोडेर सिने क्षेत्रमा लागेकी थिइन् । उनी चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा मात्र १४ वर्षकी थिइन् ।
यस वर्षको एसईई परीक्षामा देशभरबाट ४ लाख ५० हजार २ साय ७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने १७ हजार ५ सय ८० जना, ३.२ देखि ३.६ जीपीएसम्म ल्याउने ५१ हजार १ सय ३७ जना, २.८ देखि ३.२ जीपीएसम्म ल्याउने ६३ हजार ७ सय ४१ जना, २ देखि २।४ जीपीएसम्म ९८ हजार २ सय ७ जना रहेका छन् ।
खाँडी मूलूकले तेल बेच्न हुने हामीले पानी बेच्न नहुने ?…
जनता भ्वाइस calendar_today ५ मङ्सिर २०७७, 2:42 pm
गोकुलगंगा गाउँपालिकाले १ दिने कृषि सम्मेलन आयोजना गरेको छ । गाउँपालिका केन्द्र रहेको रस्नालुको पालिका सभाहलमा आज भएको कार्यक्रममा पालिका क्षेत्र भित्र भएका व्यवसायिक कृषक, कृषिका सरोकारवाला, स्थानीयबासी लगायत २ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणलाई उच्च सतर्कताका साथ संचालन भएको कार्यक्रममा विशेषगरी अर्गानिक उत्पादनमा गाउँपालिकाको योजना, कृषिमा आत्मनिर्भरताको सम्भावना र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिनका लागि गाउँपालिकाले गर्ने सहजिकरण आदि विषयलाई विशेषरुपमा उठाइएको थियो ।
बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको कार्यक्रम बेलुका ६ बजेसम्म चलेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधिका श्रेष्ठ नेवारले यदि गोकुलगंगा गाउँपालिकालाई साँच्चै समृद्ध पालिका बनाउने र आर्थिक स्तरलाई उँभो लगाउने हो भने आधुनिक कृषि कर्ममा लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । जनता भ्वाइसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेवारले भनिन् ‘गोकुलगंगाको एकमात्र गहना भनेको यहाँको प्रकृति हो । यस प्रकृतिमा कृषिका व्यापक सम्भावनाहरुको खोजी जरुरी छ । यहाँ उत्पादन हुने किवी, छुर्पी, आलु लगायतका कृषि उत्पादनहरुलाई निर्यातमुखी बनाउनका लागि अब चाहना मात्रै होइन, काम गरेरै फल प्राप्त गर्ने दिशामा लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले कृषकहरुलाई के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न जुनसकै बेला पनि गाउँपालिका तयार छ । कृषकहरुले बगाएको पसिना अन्ततः गाउँपालिकाको शान नै हो । त्यसैले आफ्ना पालिकाबासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई कृषिलाई आफ्नो मिसन बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष खड्कबहादुर सुनुवारले आफ्नो पालिकाको कृषिलाई अझ मजबुद बनाउँदै आयस्तरमा बढावा गर्न गाउँपालिकाले गहकिलो योजना बनाएको बताएका छन् । कार्यक्रमको सुरुआतीसँगै आफ्नो विचार राख्दै सुनुवारले गाउँपालिकाको कृषि सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र उद्धेश्यहरुलाई प्रष्ट्याएका थिए । सुनुवारको नीति, कार्यक्रम र उद्धेश्य लगानीको अभावमा कृषि कार्यलाई आधुनिकीकरण गरी आयआर्जन बढाउन नसकेका पालिका बासीहरुलाई समूह मार्फत् काम गर्न र समस्या परे गाउँपालिकासँग सहयोग माग्न आग्रह गरेका थिए । गाउँपालिकाको स्थापनासँगै हाल ३ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म २ हजार रोपनी जग्गामा किवीखेती विस्तार गरिसकेको उनले जनाएका छन् । त्यस्तै ४ वटा व्यवसायिक नर्सरीको स्थापना, ३० वटा आधुनिक बाख्रापालन व्यवसाय संचालन गरिएको अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको दृष्य सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न ४० वटा कुखुरापालन व्यवसाय संचालन गरेको बारे बोल्दै सुनुवार भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले अनुदानको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायिक कृषि कार्यमा अब युवाहरुको अझ जोश बढ्नु पर्छ । तब मात्रै हामीले सोचेको पालिकाको स्तरोन्नति हुनेछ ।’
करिब २ सय रोपनी जग्गामा व्यवसायिक लसुन र प्याजको खेती सहित १ सय ५० रोपनी जग्गामा सेतो सिमी खेती बिस्तारको कार्यबारे सुनुवारले प्रस्तुति दिइरहँदा सभाहलमा उपस्थितहरुले निकै चासो दिएका देखिन्थे ।
कृषकहरुलाई अनुदान मार्फत् उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा गोकुलगंगा गाउँपालिका निकै उदार देखिएको छ । धेरै कृषि फर्म तथा समूहहरुलाई विविध कृषि शिर्षकमा अनुदान प्रदान गरेको बारे बोल्दै अध्यक्ष सुनुवारले भने, ‘गाउँपालिकाले गरेको अनुदान लागनीले प्रतिफल आउनु पर्छ । काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने जो कोहीलाई पनि गाउँपालिका अविभावक भएर साथ दिन पछि पर्दैन । तर पालिकाले गरेको अनुदानको लागनीलाई भने उल्फाको धन, फूपूको सराद्धे भनेजस्तो हुनु हुँदैन ।’
कृषि सम्मेलनलाई काठमाडौंमा रहेको जिबिडी ग्रुप कम्पनीले सह आयोजकको भूमिकामा सहयोग गरेको थियो भने बागमती प्रदेशका सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलको प्रमुख आत्थ्यितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
नामाडी घटनामा बोल्यो तरुण , सत्ताको निरंकुशता नरोकिए जे पनि हुनसक्ने (भिडियो सहित)
जनता भ्वाइस calendar_today ४ मङ्सिर २०७७, 8:03 am
मंसीर ४, रामेछाप
नेपाल तरुण दलले जिल्ला कार्यसमिति रामेछापले आज मन्थलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । केही दिन अघि जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. ५ नामाडीमा भएको कुटपिटको घटनामा तरुणदल जिल्ला कार्यसमिति रामेछापका अध्यक्ष काजीबहादुर खड्का ‘दिनेश’ विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेपछि तरुण दलले यस्तो विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।
तरुणदल जिल्ला कार्यसमितिका उपाध्यक्ष बासुदेव फुँयाल र सचिव विश्वराज कोइरालाद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाली काँग्रेसको सालिनता, अनुशासनलाई कमजोरीको रुपमा ठानेर सत्ता र शक्तिको आडमा गरिने निरंकुशता गतिविधि अघि बढ्दै गए नेपाल तरुणदल चुप लागेर नबस्ने र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा प्रशासन स्वयमले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिन चाहान्छौं ।’
यस्तो छ विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :
आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल तरुण दलले आफ्नो बर्गिय चरित्र अनुरुप गलत प्रवृत्तिको डटेर खबरदारी गरिरहेको इतिहास जगजाहेरै छ । यसै सन्दर्भमा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. ५ नामाडीको घटना प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी वास्तविकतालाई तोडमोड गर्दै घटनाको प्रक्रियामा कुनै पनि संलग्नता नरहेका व्यक्तिहरु माथि जबरजस्त ढंगबाट राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने र पूर्वग्राही ढङ्गले बद्नियत तरवले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी नेपाल तरुणदल रामेछापका अध्यक्ष काजीबहादुर खड्का ‘दिनेश’ लगायतका व्यक्तिमाथि प्रहरीको समेत मिलेमतोमा मिति २०७७।०८।०३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा ज्यान मार्ने कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको प्रति नेपाल तरुण दल रामेछाप जिल्ला कार्य समितिको गम्भिर ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
लोकतन्त्रको दीप गाउँगाउँमा बाल्नुपर्छ अनि समाजको सर्वाङगीण विकास हुनुपर्छ भनेर गाउँको सेवामा तल्लिन रहेको व्यक्ति जसको समाज प्रतिको बढ्दो आकर्षण अनि हरेक खालका विकासका गतिविधिमा पहरेदारी गरेको देख्न नसक्ने तत्वहरुले जाल र षड्न्त्र रची आज सत्ता र शक्तिको आडमा निर्दोश व्यक्तिमाथी घटनाको प्रकृतिको यर्थाथ नै नबुझी जुन ढंगले घटना क्रम विकसित हुदै गएको छ । त्यो सत्यता बाहिर आउने छ र वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने छन् । अनि कानुन भन्दा माथि कोही छैन् भन्ने कुराको पूर्ण आभाष हुने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं र सत्यतथ्य छानविन होस् दोषी उपर कार्वाही होस् र निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने तवरले तानाबाना नबुनियोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं । नेपाल तरुण दल कानुनी राज्यको पूर्ण पालना गर्दै समाजमा रहेका हरेक खालका कुरीति र कुसंस्कारको रुपमा रहेको तत्वहरुको भण्डाफोर गरिरहेका छौं र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता खालका गतिविधिका विरुद्धमा भण्डाफोर गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।
नेपाली काँग्रेसको सालिनता, अनुशासनलाई कमजोरीको रुपमा ठानेर सत्ता र शक्तिको आडमा गरिने निरंकुशता गतिविधि अघि बढ्दै गए नेपाल तरुणदल चुप लागेर नबस्ने र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा प्रशासन स्वयमले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिन चाहान्छौं ।
Kumar Shrestha calendar_today २३ कार्तिक २०७७, 7:35 am
रामेछाप कार्तिक २३।
उमाकुण्ड गाउपालिकाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि निशुल्क हवाइ उद्दार सेवा सुचारु हुने भएको छ।
उमाकुण्ड गाउपालिका रामेछापको सबै भन्दा दुर्गम गाउपालिका भएको र सो पालिकाका गर्भवती तथा सुत्केरि महिलाहरुको उपचार नपाएकै कारण आमा र बच्चाको अकालमा मृत्यु नहोस भनि यो सेवा सुचारु गर्न पहल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा बताउछिन।
प्रजिअ शर्माका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निशुल्क हवाइ सेवा संचालन गर्ने निर्णय गरि मन्त्रालय पठाइ सकिएको छ।
टेलिकमको सेवा कछुवाको गतिमा, हाकिम भन्छन् ‘समस्या समाधान हुन्छ, ढुक्क हुनुस्’
जनता भ्वाइस calendar_today १९ कार्तिक २०७७, 10:39 am
कार्तिक १९ रामेछाप। सविना कार्की
गोकुलगंगा गाउँपालिकाका नागरिकहरू नेपाल टेलिकमको कार्यशैली र हेलचेक्राई देखेर आजित भएका छन् । गत साउन महिनादेखि मोबाइलको नेटवर्क र एडिएसएल इन्टरनेटमा आएको समस्या आज सम्म समाधान भएको छैन ।
स्थानीय उमेश गुभाजु टेलिकमको सेवा देखेर दिक्क भएका छन् । ४ महिनादेखि आएको नेटवर्कको समस्याका कारण बिहान करिब ८ बजेदेखि इन्टरनेट नचल्ने र साँझ ५ बजे पछि मात्र चल्ने गरेको उनले गुनासो गरेका छन् । ‘केही दिनदेखि इन्टरनेट नै नचलेको कारण र नेटवर्कमा आएको समस्याका कारण समस्या नै समस्या भएको छ ।’ गुभाजु बताउँछन् ।
केहि दिनदेखि नेट नै नचलेकोले चुचुरेका नागरिकहरु इन्टरनेटको पहुँचबाट बाहिरिएको दुखेसो पोख्छन् स्थानीय रामु कार्की । ‘इन्टरनेट चल्दा मोबाइलको नेटवर्क नहुने र मोबाइलमा नेटवर्क हुँदा इन्टरनेट नहुने समस्या समेत पहिलेदेखि हुने गरेको छ ।’ उनी थप्छन् ।
कार्की अजित् हुँदै भन्छ्न, ‘जडान गर्दा ५१२ केबिपिएस् स्पीडको इन्टरनेट दिने भनिएको भए पनि अहिले सो स्पीडको सेवा सेवा प्रदायकले दिन सकेको छैन । जडान गरेको एक हप्तासम्म इन्टरनेटको स्पीड लोभ लाग्दो थियो तर त्यसपछि भने इन्टरनेट नाम मात्रैको मात्र बनेको छ । देखाउनका लागि मात्रै राखे जस्तो भएको छ ।’
गोकुलगंगा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य ललिता श्रेष्ठका अनुसार ‘नेपाल टेलिकम रामेछापलाई यो समस्या बारम्बार सुनाउँदा पनि उसले समाधानको बाटो खोजेको छैन । विगत ४ महिनादेखि मोबाइलको नेटवर्क र एडिएसएलमा समस्या आउनाले छोराछोरीको अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको छ । टेलिकम रामेछापले गुनासोको उचित् सुनुवाई नगरेपछि हेडक्वार्टरमा समेत गुनासो गरेकी थिएँ, तर केही पार लागेन । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले यो समस्याको बारेमा टेलिकम रामेछापमा खबर गर्दा समेत टेलिकमले वास्ता नगरी कानमा तेल हालेर बसेको झैं भएको छ ।
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनुवार समेत आफूले टेलिकममा सेवा संचालन सम्बन्धी गुनासो राखेको र छिट्टै समाधान गरिदिन्छु भन्ने टेलिकमको जवाफ आए पनि सो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् ।’
नेपाल टेलिकम रामेछाप शाखाको भनाई भने सँधै रेडिमेड नै हुने गरेको छ । कार्यालय प्रमुख विष्णु भण्डारी तुरुन्तै समस्याको समाधान हुने बताउन कहिल्यै चुक्दैनन् । सदा जस्तै उनी उही जवाफ यसरी दिन्छन्, ‘हाम्रो प्राविधिक टोली शिवालयमा काम गरिरहेका छन्, यो समस्या आजभोलिमा नै समाधान हुन्छ । पहिले बाम्ती देउरालीको टावरमा समस्या थियो त्यो समस्या हाल समाधान भई सक्यो । अहिले फ्रिक्वेन्सीको समस्या पनि समाधान भएको सकेको छ । अब चुचुरेमा त्यस्तो कुनै समस्या आउँदैन ।’
ढुक्क हुनुस् ।
जनता भ्वाइस calendar_today ६ कार्तिक २०७७, 3:50 am
बुझ्ने मानिसहरू भन्थे –‘अप्ठ्यारोमा राज्यतत्व असाध्यै क्रूर हुन्छ’ यो कुरामा पहिले विश्वास लाग्दैनथ्यो । राज्यलाई अभिभावकको भूमिकामा हितैसी देख्ने गरिन्थ्यो । संसारका कतिपय राज्यहरू ‘रामराज्य’ कै भूमिकामा समेत छन् । खोजीपसे कतिपय राज्यहरू ‘रावण राज्य’का परिचयमै पनि होलान् ।
तर यसपालि माथिको भनाइ सोरैआना सत्य लाग्न थाल्यो । गाउँघरमा सामान्य जीवनयापन गर्ने गरिब र दुखीहरूका मुखबाट यस्ता कुरा सुनिन थालिएको छ । कोरोनाजस्तो महामारी हाम्रोजस्तो देशका लागि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने मामलामा ‘के निहूँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ’ भैरहेको छ ।
मध्य कोरोनाको महामारीमा अर्थमन्त्रीले असारका केही हप्ता करदातालाई कर तिर्नका लागि लकडाउन केही खुकुलोझैँ बनाइदिएका थिए । सो समयमा जनतालाई खानेलाउने कुरा छ कि छैन, राहतको आवश्यकता छ कि भन्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै सरकारलाई करको मात्र दरकार रहेको रहेछ भन्ने तर्क पनि उठेथ्यो ।
बजेटमा राहतका कुनै देखिने काम गरेनन् –अर्थमन्त्री युवारज खतिवडाले । बिजुली गाडीको कर बढाए तर आफ्नो नातिले खाने विदेशी चकलेटमा भने घटाए । पुस्तकमा लागेको कर उस्तै छ बिलासिताका वस्तुमा भने छुट दिए । यसरी अलोच्य भएर सरकारबाट बाहिरिँदा जनताले उति बिस्मात गरेनन् ।
अहिले सरकार विपक्षी त परै जाओस् आफ्नै शुभेच्छुक र भोटरहरूबाट समेत पाँडे गालीको सिकार भैरहेको छ । ‘दुई तिहाइ नजिकको सरकार यतिको निकम्मा होला भन्ने लागेको थिएन ’ –संघीय समाजवादीका एक केन्द्रीय सदस्य हाकाहाकी नै भन्छन् ।
कतिपय मानिसहरूले सरकारलाई नयाँ नामकरण गरेर ‘करकार’ पनि भन्ने गरे । गरिखाने जनताहरू भोकभोकै मर्दा सरकारले रत्तिभर सुनेन । स्थानीय निकायले सकेको मद्दत गरे । कतिपय परोपकारी संघसंस्थाले सकेको मद्दत गरेर मानिसहरू बँचाए ।
अहिले फेरि सरकार कोरोना उपचारका मामलामा हात उठाएर पछि सरेको छ । पहिले ‘बेहोस् नभई अस्पताल नआऊ’ भन्यो जनताले माने । फेरि ‘सामान्य अवस्था हुँदा घरमै क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस भन्यो’ त्यो पनि जनताले माने ।
हुँदाहुँदा अहिले आएर सरकार जनताको संंवैधानिक स्वास्थ्योपचारको हक विरुद्ध गएर ‘कोरोना लागेर बाँच्न मन लागे आफैँ उपचार गरेर बाँच नत्र मर’ भन्छ भने जनताले अब सरकारले भनेका सबै कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन् ‘सरकार जनताको उपचार गर्न सक्दिनँ भन्छ भने जनताले पनि कर तिर्न सक्दैनौ भने भने नि ।’ यी अभिव्यक्तिले मुलुक मुठभेडतर्फ अघि बढेको भान हुन थाल्यो ।
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क पिसिआर् परीक्षणमा गरेको आदेश बर्खिलाप गरेर सरकार अब सरकारी पदासिन व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधिहरू र पावरवाला मानिसहरू भन्दाबाहेक गरिब, दुखी, पछि पारिएका जनता र छेउ लागेका मानिसलाई ‘सके बाँच नसके मर’को शैलीमा उर्दी फर्मान गरिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक सरकारले देखाउने राजनीतिक चरित्र पक्कै होइन ।
‘के यी सरकारका सदस्यले पाँच वर्षमा चुनाव फेस गर्नु पर्दैन । जनताले अहिले सबै कुरा मनमा लिइरहेका छन् । उपयुक्त समयमा पाइपाइ हिसाब गर्ने छन् ।’ –त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सहप्रा तथा लेखक विधान आचार्य आफ्नो रोश प्रकट गर्दछन् ।
देखाउनलाई चुनावबाट जनताले चुनेको सरकार छ । करिब तीसौ हजारका संख्यामा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा शासनका लागि बलियो सरकार छ । अनि जनताले चाहिँ महामारीमा उपचारै नपाएर मर्नु पर्ने भए केका लागि सरकार पालिरहनु ? कर तिर्नका लागि ? बेथितिका लागि ? अराजकताका लागि ? या आफ्नै मृत्युको ल्याप्चे आफैँ लगाउनका लागि ! यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ !
स्रोतहरूले भन्छन् –‘सरकारको ढुकुटीमा अझै सवा २ खर्ब रूपैयाँ छ । कोरोना कोषमा ६ अर्ब मौज्दात छ । ५ अर्ब बजेट कोरोनालाई नै छुट्याइएको छ ।’ स्थानीय र प्रदेशमा पनि कोरोनाका लागि निर्धारित बजेट छन् भने सरकारले यो अवस्थामा आफ्नो उपचार आफैँ गर भनेर जनतालाई भन्नु भनेको एक हिसाबले धम्क्याउनुजस्तै हो । ‘के यी सरकारका सदस्यले पाँच वर्षमा चुनाव फेस गर्नु पर्दैन । जनताले अहिले सबै कुरा मनमा लिइरहेका छन् । उपयुक्त समयमा पाइपाइ हिसाब गर्ने छन् ।’ –त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सहप्रा तथा लेखक विधान आचार्य आफ्नो रोश प्रकट गर्दछन् ।
सरकारले यसोभन्दा प्रतिपक्षचाहिँ मुखमा दही जमाएर बसेको छ कि क्या हो ? न कुनै विरोध छ ? न कुनै सडकमै उपस्थिति छ ? जनता त दुवैलाई चाहिन्छन् नि हैन ?
महामारीको दोस्रो चरण युरोप र अमेरिकामा फेरि देखिएको छ । अहिले ९० लाखभन्दा बढी बिरामी अमेरिकामा र ७५ लाखभन्दा बढी बिरामी भारतमा रहेका छन् । यो वर्ष त्यतिकै जान सक्छ । अझ खोप बनाउने ‘दादा’ राष्ट्रहरूले त के पनि भनेर जनतालाई अत्याृउने काम गरेका छन् भने –‘स्वस्थ व्यक्ति र युवाहरूलाई यो खोप सन् २०२२ मा मात्र मिल्न सक्छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठन नै यस्तो खालको डंका पिट्छ भने अरूको के भर ?
त्यसैले बुझ्ने मानिसहरूले भनेको ‘अभरमा सरकारको भर हुँदैन’ भनेको ठीक रहेछ । हामी बेथिति, गरिबी, अज्ञान, अशिक्षा र कुपोषणसँग लड्नुपर्ने मानिसहरूले कोरोनाको भार धेरै थाम्न सक्दैनौं । फेरि हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था यति भद्दा र झन्झटिलो भयो कि यहाँ संघीयता भनेर फेरि ‘महेन्द्रकालीन नामहरू’ नै जुराएर प्रदेशमा शासन गर्नेहरू ‘नयाँ मुखिया र जिम्मावाल’ का रूपमा उदाए । जसले गर्दा जनतालाई यो व्यवस्था स्वयम् बोझिल रहेछ भन्ने कुराको भान पर्न थालिसक्यो ।
केही दिनअघि कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव र मुख्यमन्त्री फेर्ने विवादमा केन्द्रले दुवै पक्षका झगडीया नेताहरूलाई केन्द्रमा बोलाएर अर्ती दियो ।
पहिलो त प्रदेश आफैँमा स्वतन्त्र शासकीय अधिकार सम्पन्न निकाय हो । सानातिना झैझमेला पर्दा खुरुरुरु कुदेर संघीय राजधानीमा आई प्रधानमन्त्रीमा फिराद गर्नै पर्दैन । तिनीहरू त्यहाँ आफैँ आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम छन् । तर यसपाली भैदियो के भने प्रम केपी ओलीले ‘प्रदेश केन्द्रको आदेश मान्ने शासकीय युनिट मात्रै हो’ भनेर फेरि अर्कोपल्ट संघीय सिष्टममै प्रश्नचिन्ह लगाउने अभिव्यक्ति प्रकट गरे ।
अहिले यो देश दुई बूढाहरूको मनोकांक्षामा चलेको छ । बाँकी सबै कानुनसानुन र नियमसियम मिलाउनका लागि राखिएका फड्के साक्षीजस्ता भएका छन् । ती बूढाहरूले जे चाहे त्यही यो देशमा भैरहेको छ । सहमति, वार्ता र सम्झौताका नाममा । युवाहरू यो सब टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । तिनीहरू पढेका छन् । काबिल छन् । देशदेशावर बुझ्छन् । विधि र प्रविधिमा समेत पोख्त छन् तर ती कि त नेकपाका हनुमान छन् कि त काँग्रेसका प्यादा ! यसरी एउटाएउटा पार्टीमा डामिएर बसेपछि ती सत्य बोल्नै सक्दैनन् । शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीलाई विरोध गर्न तिनले हुँदैन भने प्रचण्ड र ओलीले गर्ने खराब कर्तुतलाई तिनले आँखा चिम्लेर सहिदिनुपर्छ । अनि यसैलाई लोकतन्त्रको छाप लगाई बूढाहरूको सामन्ती र हुकुमी शासनमा साक्षी बसिदिने काम गर्नुपर्छ भने खुन र पसिना एकत्रित गरी ल्याएको गणतन्त्रको के काम ?
यी र यस्ता प्रश्नहरू अब कोभिड महामारीका सिलसिलामा मात्र होइन । रोजगारी गुमाएर देश आएका ती बेरोजगार तीसौं लाख युवाहरूले एकसाथ सडकमा आएर सोध्ने दिन नआउला भन्न सकिन्नँ । अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यही देखिन्छ । ‘सबै पावर भएका साना ठूला शासकहरू ‘सुतेश्वर’ अनि मृत्यु गणनाका लागि एकजना डाक्टर चाहिँ ‘जागेश्वर’ भएर अब कोरोनासँग लडेर बाहिर आउन सकिने स्थिति छैन ।’ सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, अदालत र सबै राजनीतिक शक्तिले ग्राउन्ड रियालिटी बुझेर काम नगरे देश क्रमशः यही महामारीकै सिलसिलामा ‘असफल राष्ट्र’ नहोला भन्न सकिन्नँ ।
अहिले दसैँको माहोल भए पनि चारैतिर यही कुरा मात्र सुन्नमा आइरहेको छ ।
जनता भ्वाइस calendar_today २९ असोज २०७७, 5:12 am
असोज २९, पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाको कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि महानगरपालिकाले आफ्ना सेवाहरु अनिश्‍चितकालका लागि बन्द गरेको छ ।
बिहीबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी केही कर्मचारीमा कोरोना देखिएको र केही कर्मचारी ट्रेसिङमा परेका कारण सेवा बन्द गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
मेयर मानबहादुर जीसीका अनुसार अत्यावश्यक कामहरु र वडाले दिने सेवा भने निरन्तर रहनेछ ।
एउटा काहालीलाग्दो जिन्दगीको वास्तविकता, न आफैं कमाउन सक्छन् न कामाउने नै कोही छ (भिडियो सहित्)
जनता भ्वाइस calendar_today २८ असोज २०७७, 11:20 am
असोज २८, प्रकाश /कुमार।
बर्खाको महिना, झमझम पानी परिरहेको समय छ । यो समयमा प्रकृति यति मायालु बनेको छ कि, लाग्छ धरति यतिबेला रजस्वला भएको छ । धरतिले काँचुली फेरेको बेला हो यो भन्छन्, कवि मन भएका कलमजीविहरु यसलाई ।
चारैतिर डाँडाकाँडा कुहिरो र तुवाँलेले ढाकिएका छन् । हेर्दा प्रकृतिले घुम्टो ओडेको जस्तो देखिन्छ । घुम्टोभित्र यो धरति यसरी लुकेको छ, जहाँ धरति र आकाशको लुकामारी चलिरहेको छ । रातो माटोको पृष्ठभूमिमा आकाशका अप्सराले प्रयोगगर्ने अत्तरको थोपा चुहिएझैं लाग्ने गरी पानी बर्षिरहेको छ, तप्प तप्प, तप्प ।
आकाशको पानीले धरतिलाई पनि अन्याय गरिरहेको झैं लाग्छ काहीँकाहीँ त । एउटै धरतिको आँचलमा पनि कतै हरियो रंगले आफूले आफैंलाई सिँगारेको छ त कतै रातो रंगले । सर्सर्ती हेर्दा लाग्छ, हरियो रंगले प्रकृति आफूलाई जीवनवादी भएर देखाउन चाहन्छ भने कतैकतै चाहिँ क्रान्तिवीर ।
तस्वीर : लठ्ठी साहारामा अाफूलाई उभ्याउँदै म्हेम्बर । जनता भ्वाइस ।
दर्शकहरु, आज हामी यही प्रकृतिमा रहेर रमाएका एकजना व्यक्ति, जो जीवन विहिन जीवन जसोतसो जिउँदै गरेका छन् । उनै एकजना पात्रलाई यहाँहरुको माझमा प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौं । यहाँहरुले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएका व्यक्ति वास्तवमै जीवनले ठगेका पात्र हुन जस्तो लाग्छ ।
रामेछाप जिल्ला रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ९ सिमन्तीमा बसोबास गर्ने म्हेम्बर तामाङको दर्दनाक अवस्था यहाँहरुको माझमा देखाइरहेका छौं । यतिबेला ५२ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका छन् म्हेम्बर आजका दिनसम्म । जन्मेको ६ वर्षको चञ्चलतापूर्ण अवस्थामा उनी जीवन रहेसम्मका लागि अपाङ्ग बनेको बताउँछन् । २०२५ सालको त्यो परिवेशले उनको जीवनमा जीवनको रंग त भर्यो तर रंग भरेको ६ वर्ष अर्थात् २०३१ सालको साउन महिनामा उनको उही जीवनको आधा रंग नियतिले खोसेर लाग्यो, जीवनलाई अपाङ्ग बनाइयो ।
उपचारका लागि बिराटनगर र धरानका अस्पतालमा त्यो बेलामा डोकोमा बोकिएर धाउँदा पनि उनको अवस्था नसुध्रिएको म्हेम्बरको भनाई छ । यतिबेला तामाङ दुबै गोडलाई टेकेर सामान्य मान्छे जस्तो उभिन सक्दैनन् । २ वटा लठ्ठीको साहारामा आफूलाई यताउता लैजाने गरेका छन् । आफूलाई धेरै माया गर्ने आमालाई पनि तामाकोसी र सुनकोसीको संगम बेनीघाटले खाइदिएको छ । आमाको यादमा बाबुको साहाराले बाँचेको भए पनि १० वर्ष अघि आफ्नो बाबुलाई गुमाउँदा भने साँच्चै पीडा भएको बताउँछन् ।
विक्रम संवत् २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले तामाङ्को १ तले घरलाई पनि ढाल्यो । घर ढलेसँगै आफ्नो साहारा र बासस्थान दुबै ढालिदिएको त्यो बेलामा तामाङ्लाई लागेको रहेछ । राज्यले भूकम्पमा छाप्रा भत्किएका तथा पहिले नै भग्नावशेष भएका र बास नै सिद्धिनेगरि भत्किएका आवासलाई पनि एउटै डालोमा हल्यो र आवास पुनर्निमाणको लागि ३ लाख दिने घोषणा गर्यो ।
यता म्हेम्बरको घर पनि सरकारले हालेको ३ लाखको डालोमा गुट्मुटिएर कोचरियो । उनले आफ्नो बास बनाउन ३ लाख पाए । ३ लाख त पाए, तर उनले पाएको ३ लाख उनलाई बालुवामा पानी खन्याय जस्तै भएको उनले हामीसँग बताएका छन् ।
आफूले अपाङ्ग भत्तास्वरुप पाएको रकम र आफ्नै जग्गामा टेलिफोन कम्पनी एनसेलले टावर बनाएर महिनावारी दिने २–२ हजार रुपैयाँ बचाएर राखेको रकमबाट ३ लाख गरी ६ लाखमा २ कोठे भवन बनाएका रहेछन् । एनसेलले टावर राखे पनि त्यसको नियमति देखभालका लागि कुनै शुल्क नलिई त्यो बापत् सोही टावरले व्यहोर्ने गरी २ वटा बत्ती बालेको भएपनि हालका दिनमा सो बत्ती पनि कटौती गरिदिएकोमा उनले निकै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
तस्वीर : अाफ्नाे घरकाे पेटीमा बसेका म्हेम्बर । जनता भ्वाइस ।
भवन त बनाए, तर त्यो भवनलाई सिँगारपटार गर्ने काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । नयाँ बनाएको घरमा न झ्याल हालेको छ, न ढोका नै । चार भित्ता र छानो मात्रै ठड्याएको घरमा कुनै फिनिसिङ गरिएको अवस्थामा छैन ।
उनी आफ्नो आगामी जीवनको बारेमा सोच्दा रहेछन् । हिजोको जीन्दगीमा आएका चुनौतिलाई सामना त म्हेम्बरले गरेरै आजका दिनसम्म आइपुगे । तर भोलिको जीवन कस्तो बन्ला भन्ने चिन्ता उनको मनमा मडारिने गरेको उनले हामीलाई बताएका छन् । एकमुठी तातो पानी पनि भोलिका दिनमा दिने कोही नहुने कुराले उनलाई निकै सताउने गरेको छ ।
म्हेम्बरका आफ्ना धेरै समस्याहरु छन् । उनी राम्ररी हिँड्न सक्दैनन् । सुत्नेघरदेखि भान्छाघरको यात्रा उनको लागि निकै कष्टकर हुन्छ । दुबै हातले लठ्ठी टकेकर त्यही लठ्ठीको साहारामा कान्ला उक्लिनु पर्दाको पीडा उनलाई सहिनसक्नु हुने तामाङ बताउँछन् । हत्केला र घुँडाका छालाहरु घोटिएर १० बाली काँधमा जुवा राखेर जोती बुढो भएको गोरुको काँध जस्तो भएको देख्दा मन अमिलो हुने अवस्था छ ।
उनी आफ्नोलागि भन्दा अरुका लागि सहित् हुने समस्या बताउँछन् । उनलाई आफ्नो घरमा झ्याल र ढोका नभएकोमा चिन्ता छैन । चिन्ता छ त केवल, गाउँमा भएको खानेपानीको समस्याको मात्र । आफूलाई एनसेल टावरले दिएको २ वटा बत्तिको लाइन समेत काटिए पछि आफ्नो जीवन दिउँसै अंध्यारो भएकोमा अब त राती पनि अध्यारो भएको बताउँछन् । उनलाई यतिबेला बिजुरीको बेहद् खाँचो छ, तर कसले दिने ? गरीब, दुखीको साहारा यो स्वार्थी दुनियाँमा को हुने रहेछ र ? गरिब दुखीको साहारा भनेको भगवानलाई मानिन्छ । तर त्यो पनि नदेखिने भएर हिँड्छ होला, बोल्न नसकेर लाटो भएको होला ।
उनी शरीर अपाङ्ग भएपनि दिमागका भने असाध्यै सबल देखिन्छन् । उनको बुझाई निकै उच्च कोटिको छ । उनले आफ्नो शारीरिक अवस्थाको कारणले पढ्न नपाए पनि जीवनकालको मध्यविन्दुमा भने प्रोढ कक्षा पढ्न पाएका रहेछन् । आफूले पढ्न पाएको प्रौढ कक्षामा जीवनवादी शिक्षा पाएका रहेछन् भन्ने अनुमान हामीले पनि गर्न सक्यौं । समाजिक कुलतका विषयमा उनको बुझाई असाध्यै उच्चस्तरीय रहेछ । केही समय गाउँमा नै पढेको प्रौढ कक्षाको कारण उनी यतिबेला आफ्नो नाम कनीकुथी लेख्न सक्ने भएछन् । प्रौढ कक्षाको पढाईको कारणले उनी आफूमा धेरै परिवर्तन आएको बताउँछन्
उनको जीवनमा धेरै चुनावहरुलाई उनले व्यहोरेका छन् । देशमा भइरहने हरेक चुनावहरुले कतै न कतै गरिब, भोका तथा दीनदुखीहरुको मर्मको भावलाई बोल्ने गर्छ भन्ने विश्वव्यापि मान्यता छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो गरिबी, दुखदायी अवस्थाको अन्त्य होला भन्ने आसमा उनले पनि पटकपटक कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीलाई भोट हालेका छन् । भोट किन हाल्नु पर्छ भन्ने पनि उनलाई उनको स्तर पर्याप्त बुझाई रहेछ । आफूले अघिल्लो चुनावमा कसलाई भोट हालें भन्न पनि उनी हिच्किचाउँदैनन् । पछिल्लो समयमा भएको संघीय राज्य व्यवस्थाले उनको चेतनामा सामाजिक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने छाप छोडेको रहेछ ।
रामेछापका सहयोगी मन (रामस) ले मन्थलीमा संचालन गरेको फुडबैंकको काउन्टर सेवा भन्दा बाँकी समयमा गाउँगाउँमा भएका असाहय, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा सहयोगमुखी राहत वितरणमा रासमले पहिलो पटक भेटेको हो म्हेम्बरलाई । रासमले म्हेम्बरलाई १ बोरा चामल, १ लिटर तेल, ४ केजी दाल, २ केजी नुन र १ केजी सोयाबिन वितरण गर्न जाँदा गरेको अनुभव हामीलाई रासम सदस्यद्वय जय मानन्धर र विपिन भट्टराईले बताएपछि उनको अवस्थालाई बुझ्न हामी पनि लागेका हौं सिमन्ती तर्फ ।
तामाङ्को त्यस्तो अवस्थालाई देख्दादेख्दै रिपोर्टिङ्को लागि मात्रै क्यामेरा तेस्र्याउन मात्र जान हामीलाई पनि मन लागेन । जसरी रासमले दाताले दिएको सहयोगलाई न्ययोचित वितरण गरी गरिब दुखीको सेवा गरिरहेका छ, त्यसरी नै हामी पनि उनलाई सहयोग जुटाउन तर्फ लाग्यौं । सहयोग खोज्दै जाँदा युवा व्यवसायी हरेराम बस्नेत, जो मन्थलीको बसपार्कमा सुनापति बेकरी फुड प्रोडक्ट संचालन गरी बसेका छन् । उनलाई हामीले तामाङ्को बारेमा बतायौं । बस्नेतले आफूले आफ्नो तर्फबाट सक्नेजति करिब २ हजार बराबरको बिस्कुट तथा बेकरी खाजा आइटमको पोको पारिदिए । त्यही पोकोलाई हामीले पनि उच्चकोटीको सहयोग मानी स्वीकार ग¥यौं ।
बस्नेतले खाजाको बन्दोबस्त त गरिदिए । अब उनको हातमा केही रकम पनि राखिदिन पाए उनी झनै खुशी हुनेथिए भन्ने आंकलन हाम्रो टिमले फेरि ग¥यो । त्यसको लागि पनि दाता खोज्ने काम भयो । पैसाको माम्लो, आफूसँग भएको रकम सजिलै त कसले दिन्थ्यो र ? धेरै व्यक्तिहरुसँग सहयोग माग्दै गर्दा हामी पुग्यौ, रामेश्वर पाण्डेसँग । पाण्डे यतिबेला रामेछाप जिल्लाको ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत् राष्ट्रसेवक हुन् । उनलाई हामीले तामाङ्को बारेमा बतायौं र हामीहरुको योजना सुनाउनासाथै उनले अबिलम्ब आफूसँग भएको ३ हजार रुपैयाँ हाम्रो हातमा थमाइदिए । यसले त हामीलाई झनै हौसला मिल्यो ।
हामी २ जना महान मनकारी दाताले दिनुभएको सहयोगको पोको बोकेर सिमन्ती पुग्यौं । जब हामीले तामाङ्लाई सो सहयोग हस्तान्तरण ग¥यौं तब उनको अनुहारमा अलग्गै किसिमको आभा प्रष्ट देख्द सकिन्थ्यो । हेर्नुस् न पाठकवृन्द, अभावमा बाँच्नेहरुका लागि सानो सहयोग पनि कति मूल्यवान हुँदो रहेछ ।
यतिराम्रो प्रकृतिको सिर्जना । यही मनमोहक सिर्जनाको मोहकता कता हो कता आनन्दमय बन्ने गर्दछ । तर यता यस्तै प्रकृतिको मोहकतामा मुर्झाएका म्हेम्बरहरु हाम्रो समाजमा धेरै छन् । यस्ता अनगिन्ती म्हेम्बरहरुलाई हामी खोजी गर्दैछौं । हामी त एक माध्यम मात्रै हौं । म्हेम्बरलाई बिना स्वार्थ सहयोग गर्ने रामेश्वर पाण्डे जस्ता कुशल प्रहरी रत्न देखि समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्दै र राज्यलाई कर तिर्दै आइरहेका हरेराम बस्नेत जस्ता मनकारीहरुलाई हामी पनि अत्यन्तै आदरपूर्वक सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।
म्हेम्बरको ढोका सम्म पुग्ने गोरेटो निर्माण गरिदिने रासम परिवार पनि उत्तिकै धन्यवाद्को पात्र हाम्रालागि बनेको छ । जिल्लामा भएका अन्य यस्तै असाहय गरिब दुखी हरुको लागि हामी सेवाभावले खटिँदा आउने तपाईंहरु सँगै हो फेरिपनि । यस्तो अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न यहाँहरुले ठूलो मन पारिदिनु पर्छ है पाठकवृन्द ?
कोरोनाको संख्या बढ्दो, सिन्धुली अस्पतालमा आकस्मिक र प्रसूतिबाहेक अन्य सेवा बन्द
सम्झना श्रेष्ठ calendar_today २१ असोज २०७७, 7:43 am
अशोज २१, सिन्धुली ।
जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार बढेको छ । हिजो मङ्गलबार मात्र जिल्लामा सबैभन्दा बढी २७ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा ९ महिला र १८ पुरुष छन् । जिल्लामा हालसम्म १०४ पुरुष र २९ महिला गरी १३३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । हाल सिन्धुलीको एपोलो अस्पतालको आइशोलेसनमा १६ जना, सिन्धुली अस्पतालको आइशोलेसनमा १ जना र होम आइशोलेसनमा ३६ जना गरि ५३ जनाको उपचार भैरहेको छ । संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख जितेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म ८० जनाले कोरोना जिति घर फर्किएका छन् । अब ४२ जनाको पिसीआरको रिर्पोट आउन बाँकी छ ।
यसैबिच सिन्धुली अस्पतालले आजदेखि केही सेवा बन्द गरेको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीमा पनि कारोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल प्रशासनले सूचना जारी गर्दै आपत्कालीन उपचार बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बढ्दै गएको र यसबाट अस्पतालका कर्मचारी पनि सङ्क्रमित भएकाले अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म आजदेखि अस्पतालको आकस्मिक र प्रसूतिबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
यता कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि मालपोत कार्यालय सिन्धुली पनि बन्द भएको छ । कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अनिश्चितरूपमा कार्यालय बन्द गरिएको छ । कार्यालयले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म कार्यालय बन्द रहने जनाएकोे छ । यसैगरि जिल्लामा रहेका वित्तीय संस्थामा सिद्धार्थ बैंक, एनसीसी बैंक, मेगा बैंक पनि बन्द भएका छन् ।
जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्थानियमा त्रास छाएको छ । दशैँ नजिकिँदै गर्दा स्थानिय व्यवसायि तथा उपभोक्ता सबै मारमा परेका छन् ।
जनता भ्वाइस calendar_today २१ असोज २०७७, 3:02 am
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड–१९ सम्बन्धी लेखेको पोस्टलाई ट्विटरले लुकाइदिएको छ भने फेसबुकले पनि डिलिट गरिदिएको छ । सो पोस्टमा उनले कोरोना भाइरस फ्लुभन्दा धेरै कम हानिकारक हुने दाबी गरेका थिए । जुन गलत थियो ।
कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि ट्रम्पले उपचारका क्रममा तीन दिन अस्पतालमा बिताए । र सोमबार नै विवादास्पद रुपमा ह्वाइटहाउस फर्कने निर्णय गरेका थिए । यसबीच उनले आफ्नो पोस्टमा यस्तो लेखेका हुन्, “अमेरिकाले यसअघि नै फ्लु सिजनमा फ्लुसँगै बाँच्न सिकिसकेको छ । र त्यसैगरी हामी अहिले कोभिडसँग पनि बाँच्न सिक्दैछौँ जुन प्रायः जनसङ्ख्यामा एकदम कम हानिकारक छ ।”
उनको यही पोस्ट ट्विटरले सम्भावित जोखिमपूर्ण अनि गलत जानकारी फैलाउन खोजिएको भन्ने चेतावनी सहित लुकाइदिएको छ । प्रयोगकर्ताहरुले सो पोस्ट पढ्नका लागि त्यो चेतावनीपूर्ण म्यासेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यता फेसबुकका पोलिसी म्यानेजर एन्डी स्टोनले पनि आफूहरुले कोभिडको गम्भीरता सम्बन्धी गलत सूचना प्रवाह गर्ने किसिमका पोस्टहरु सधैँ हटाउने गरेकाले ट्रम्पको उक्त पोस्ट पनि डिलिट गरिसकेको बताएका छन् ।
जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीका अनुसार कोभिड–१९ को मृत्यदर सटिक सङ्ख्यामा थाहा भइसकेको छैन तर यो फ्लुभन्दा १० प्रतिशत वा अझ बढी गुणाले हानिकारक छ । यसरी फेसबुकले राष्ट्रपति ट्रम्पको पोस्ट डिलिट गर्नुपरेको यो दोस्रोपटक हो । ट्विटरले भने उनलाई बारम्बार यस किसिमको चेतावनी दिने गरेको छ । धेरैचोटी पोस्ट डिलिट पनि गरिसकेको छ । दुवै सामाजिक संजाल प्लेटफर्मले भाइरस सम्बन्धी गलत सूचना प्रवाहलाई कदापी नसहने यसअघि नै प्रतिज्ञा गरिसकेका छन् ।
तर अर्कोतर्फ बारम्बार सचेत गराइरहँदा समेत ट्रम्पले उल्टै यी कम्पनीहरुको नीतिलाई नै गलत ठहर्याउने गरेका छन् । गत मे मा पहिलोपटक ट्विटरले उनको पोस्टमाथि चेतावनीपूर्ण संकेत राखिदिएपछि ट्रम्पले धारा २३० सम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नियम अन्र्तगत सामाजिक संजालले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरु द्वारा पोस्ट गरिएका सामग्रीको जिम्मेवारी लिँदैन भनिएको छ । तर, हिंसात्मक अनि अपमानजनक कन्टेट चाहिँ ब्लक गर्न पाउँछ । यस्तोमा ट्रम्पले कोभिड सम्बन्धी उनका पोस्ट फेरि पनि डिलिट गरिएकामा ‘रिपिल सेक्सन २३०” भनेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
ट्विटर र फेसबुक दुवै कम्पनी लामो समयदेखि नै ट्रम्पका आपत्तिजनक पोस्टहरुबारे गम्भीर कदम उठाउन दबाबमा रहँदै आएका छन् । ट्रम्पले यसअघि कोभिडबारे लेखेको ‘यससँग डराउनु हुँदैन’ भन्ने पोस्टले पनि यतिबेला विभिन्न किसिमका आधारविहिन अफवाह फैल्याउन सुरु गराइसकेको बताइएको छ ।
जनता भ्वाइस calendar_today २० असोज २०७७, 7:44 am
शिक्षामार्फत् व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास हुने प्रक्रियाका चार खम्बा छन्, सिक्ने, सिकाउने, सिक्न पठाउने र सिक्नका लागि वातावरण बनाउने । यी चार खम्बाको व्यवहार सन्तुलनले नै शिक्षाको घर अपेक्षित हुने हो । तर, जिम्मेवार चारमध्ये तेस्रो पक्ष सिक्न पठाउनेहरू अर्थात् अभिभावकमा आफ्नो दायित्वप्रतिको सचेतनास्तर भने उल्लेख्य मात्रामा कम देखिएको छ ।
अभिभावकमा रहेको न्यून चेतनास्तरले गुणस्तरीय शिक्षा रूपान्तरणमा देखिएको समस्यालाई मलजल पुगिरहेको छ । अभिभावकले थोरै ध्यान र समय नदिँदा रोगी, अराजक र महान–लक्ष्य न्यून भएको पुस्ता हुर्किरहेछ । पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको अभिभावक शिक्षाको सवालमा समाजसँग अन्तक्र्रिया गर्ने हो भने सबैको मनमा असल–पुस्ता हुर्कियोस् भन्ने चाहना रहेको तर व्यवहार त्यसविपरीत भएको पाइन्छ ।
‘घरमा ट्वाइलेट छैन, हातमा मोबाइल’ पछिल्लो समयमा जमघटहरूमा यो आधुनिक नेपाली उखानले निकै ठाउँ पाएको छ । यसले हाम्रोजस्तो सङ्क्रमणकालीन समाजमा सूचनाप्रविधिको विश्वव्यापी बढ्दो प्रसारको प्रभावलाई राम्रो व्यङ्ग्य गरिरहेको छ । आज हुने–नहुने सबै वर्गका नेपाली, बाल, वृद्ध, वनिताहरु मोबाइल, आइपड, एमपिथ्री, डिभिडी, ल्यापटप, नोटप्याड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभ हुँदै इन्टरनेटको सञ्जालमा कतै हराइरहेका छन् ।
शिक्षाको मुख्य ‘सिस्टम’ राज्यद्वारा निर्मित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ । पाठ्यपुस्तक, प्रयोग सामग्री, कम्प्युटर, मोबाइल, आइपड, एमपिथ्री, टेलिभिजन, रेडियो, क्यामरा, पत्रपत्रिका आदि सिस्टमका पेरिफेरलहरू हुन् ।
माल पाए पनि त्यसको सदुपयोग विधि चाल नपाएर सूचना प्रविधिसम्बन्धी ग्याजेटहरूको जालोमा कुहिराको कागझैँ नियति भोग्दैछ वर्तमान पुस्ता । सूचना–प्रविधिका उपकरणहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि राम्रो सन्दर्भ सामग्री हुनुपर्ने हो । तर, सिद्धान्ततः त्यसको प्रयोगको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोमा देखिएको सघन अनभिज्ञताले हाम्रो भविष्य शरीरले पक्षघातपीडा र विचारले स्वछन्दतातर्फ उन्मुख छ । यसप्रति सरोकारवालाको न्यून चिन्ता अर्को दुःखलाग्दो र बहसयोग्य सवाल बनेको छ ।
शिक्षाको मुख्य ‘सिस्टम’ राज्यद्वारा निर्मित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ । पाठ्यपुस्तक, प्रयोग सामग्री, कम्प्युटर, मोबाइल, आइपड, एमपिथ्री, टेलिभिजन, रेडियो, क्यामरा, पत्रपत्रिका आदि सिस्टमका पेरिफेरलहरू हुन् । यिनै शैक्षिक पेरिफेरलमध्ये कम्प्युटर, मोबाइल, आइपड, एमपिथ्री, क्यामेरा रेकर्डर आदिमा प्रयोग हुने ‘मेमोरी कार्ड’ कति स्वस्थ छ ? कम्प्युटरको ‘गिगो’ (गुड इन गुड आउट) सिद्धान्तमा आधारित ती ग्याजेटहरूको क्षमता कतै हाम्रा छोराछोरीले दुरूपयोग गरिरहेका त छैनन् ? कति शिक्षक, कति अभिभावकमा त्यसप्रति चासो छ ? के अभिभावकले त्यस्तो चासो बढाउनु अनावश्यक वा नाजायज हो ? अभिभावकहरूको दृष्टिकोणमा यो विषयले कति महत्व पाएको छ ? यी र यस्ता अनेक सवालहरूको खोजी गर्दा थुप्रै अज्ञात र अविश्वसनीय तथ्यहरू फेला पर्छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा अधिकतर अभिभावकको सचेतना केन्द्रित नहुनु, स्वयम् शिक्षालयहरूले यसबारेमा ‘विशेष चिन्ता’ गर्ने समय आइनसकेको ठान्नु र समाजले यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाउनु विडम्बनापूर्ण र घातक स्थिति हो । सरकार र अरु सरोकारवाला युवापुस्तामा बढ्दो ग्याजेट दुरुपयोग र विकृतिप्रति मुकदर्शक देखिनु जति आलोचना गरेपनि कम हुने विषय हो ।
प्रविधिको लक्षित पहुँच क्षेत्र, बजार बिस्तार र उपभोक्ता सङ्ख्या वृद्धिको दौडमा पश्चिमा मोबाइल संस्कृतिसँगै विकृति पनि हाम्रो हातमा आइलागेको छ । नेपालमा मोबाइलको स्थिति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा नेटवर्क काटेको दिनको जस्तो छैन ।
प्रविधिको लक्षित पहुँच क्षेत्र, बजार बिस्तार र उपभोक्ता सङ्ख्या वृद्धिको दौडमा पश्चिमा मोबाइल संस्कृतिसँगै विकृति पनि हाम्रो हातमा आइलागेको छ । नेपालमा मोबाइलको स्थिति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा नेटवर्क काटेको दिनको जस्तो छैन । त्यतिबेला मोबाइल पेजरको साइँलो दाइजस्तो संस्करणमा थियो । मोबाइलमा फोन, एसएमएस तथा भ्वाइस मेल गर्ने, सर्प वा त्यस्तै साधारण खेल खेल्ने काम हुन्थ्यो । हालै एसएलसी पास गरेर प्लस टु पुगेको पुस्तालाई ‘परिमार्जित पेजर’को कुरा कथाजस्तो लाग्छ ।
एक दशक नहुँदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमाआएको क्रान्तिकारी बाढी र परिवर्तनसँगै अहिलेको पुस्ता ६४ जिबीको मेमोरीकार्ड, डबल सिम, नर्मल २० मेघापिक्सेलको क्यामरा, अत्याधुनिक रेकर्डर र इन्टरनेट पहुँचसँगै रमाइरहेको छ । सम्भव भएसम्म अहिलेको पुस्ता दू्रततर थ्री जिबी ¥याम्पसहित मोबाइलको फोर्थ, फिफ्थ जेनेरेसन क्रमशः थ्रिजी, फोरजी (ब्ल्याक बेरी, आइफोन आदि ब्रान्ड) प्राप्तिको लालसा हुर्काइरहेको मात्र छैन, पहुँच नजिक पुगिसकेको छ ।
भनिन्छ, ब्ल्याकबेरी र आइफोन हातमा हुने किशोरकिशोरी उपभोक्ताले ‘जे पनि’ गर्न सक्छन् । किनकि त्यो उमेरमा उनीहरूको मनासय तत्व सबल हुँदैन, उनीहरू भविष्यप्रति सचेत भइसकेका हुँदैनन् र उनीहरूमा ‘आफैं गरेर थाहा पाउने’ चाहनाको मात्रा चर्को हुन्छ । यस्तोमा त्यो ‘जे पनि’ भनेको के हो ? छोराछोरीलाई त्यस्ता ग्याजेटहरू किनेर दिने देखासिकी गर्ने भावना वा छोराछोरीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने चाहना भएका अभिभावकलाई थाहा छैन । उनीहरू किशोर छोराछोरी अब हुर्किसके, कुरा बुझ्ने भएका छन्, आफ्ना लागि के असल के खराब भन्ने छुट्याउन सक्छन् भन्ने विश्वासमा परेका छन् ।
भनिन्छ, ग्याजेटहरूको प्रयोगमा अहिलेको पुस्ता एक कदम अगाडि छ । तर, विकृतिको दलदलमा अघिल्लो पुस्ताभन्दा एक फिट बढी नै भासिएको पनि छ ।
कतिपय अभिभावकहरू छोराछोरीले हामीभन्दा धेरै पढिसके, फरर अङ्ग्रेजी बोल्छन्, कुरा बुभ्mछन् भन्ने भ्रममा पनि छन् । यस्तोमा अभिभावक शिक्षा तथा अभिमुखीकरणले सामाजिक अज्ञानता घटाउन निकै मद्दत गर्नसक्छ । तर, अभिभावक शिक्षाको सन्दर्भ नेपालजस्तो मुलुकमा निकै पछिल्लो प्राथमिकतामा परेको विषय हो । अहिलेको विद्युतीय सञ्चारपद्दतिको विकास÷बिस्तारको प्रक्रिया बुझ्ने सवालमा समाज झन् पिछडिएको छ । सकारात्मक पक्षलाई अभिभावकले राम्ररी बोध गर्न सकेका छैनन् । केही सहरिया, प्रविधिमैत्री, टाठा–बाठाले बुझेका होलान्, तर अधिकतर अभिभावक ग्याजेटको प्रभावबारे अनभिज्ञ छन् । सामाजिक अज्ञानताको यही उर्वरभूमिमा ल्यापटप, मोबाइल, आइपडलगायतका पश्चिमा–संस्कृतिले विकृतिको बुख्याँचा बनेर हामीलाई सताइरहेको छ ।
दुई मत छैन, अहिलेको किशोर तथा युवापुस्ताले प्रविधि पहुँच र अभिभावकमा रहेको सद्भावको व्यापक दुरूपयोग गरिरहेको छ । यद्यपि सबै त्यस्ता छैनन् । कोही गुगल अर्थमा गएर ह्वाइटहाउस अगाडिको बाटो, बरमूढा त्रिकोणको रहस्य, प्रशान्त महासागरको किनारसम्मको परिभ्रमण गरेर ज्ञान आर्जनमा रमाइरहेका पनि छन् । तर, बहुल युवाहरू ज्ञान खोजी र अनुसन्धानको काम छोडेर ‘प्रोनो कल्चर’को दलदलमा फसेका भेटिन्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल भनिए पनि मिग, ट्वीटर, फेसबुकले बालकको सामाजिकीकरण हुने प्रक्रियामा बाधा पु¥याइरहेको छ । मोबाइललगायत ग्याजेटमा हराउने बालकमा एकाकीपनको समस्या बढ्दै गएर व्यक्तित्व निर्माण क्षमतामा क्षय भएका धेरै उदाहरण छन् समाजमा । अरू मान्छेको सकारात्मक विचार र व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुने, उनीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने महत्वपूर्ण समय र अवसर नेटमा भुलिएको युवापुस्ताले गुमाउँदै गइरहेको छ ।
युवापुस्ता भनेपछि केटा वा केटी भनेर छुट्याइरहनु पर्दैन, अधिकतर खोज, उत्खनन् र आत्मज्ञानविमुख भएर समय बिताइरहेका छन् । भनिन्छ, ग्याजेटहरूको प्रयोगमा अहिलेको पुस्ता एक कदम अगाडि छ । तर, विकृतिको दलदलमा अघिल्लो पुस्ताभन्दा एक फिट बढी नै भासिएको पनि छ ।
राज्य जेष्ठ नागरिकलाई नहेर्ने युगबाट हेर्ने युगमा प्रवेश गरेको छ: मन्त्री दुलाल
सम्झना श्रेष्ठ calendar_today १५ असोज २०७७, 12:05 pm
आश्विन १५, हेटौँडा ।
वाग्मति प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले नेपालमा जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले नहेर्ने युगबाट हेर्ने युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । आज विश्व जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा शक्ति एफ्एम्सँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । नयाँ संविधान आएपछि सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य विमा, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सन्नततीले संरक्षण गर्नुपर्ने लगाएतका व्यवस्था गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
जेष्ठ नागरिकका सवालमा बनेका योजनाहरु सफल पार्न चुनौती रहेको भन्दै हामी सबै सकारात्मक सोचका साथ उहाँहरुको सम्मान, हेरचाह तथा संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय स्थानिय तहका वडाअध्यक्षहरुले वृद्धभत्ता बोकेर जेष्ठनागरिकलाई घरघरमै पुगेर वितरण गरेको पनि उदाहरण रहेको स्पष्ट पानुभयो ।
उहाँले जेष्ठनागरिकका लागि आर्थिक लगाएतका सहाएता, जेष्ठ नागरिक क्वलहरु, जेष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन, आश्रम लगाएत स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण लगाएतमा प्रदेशले काम गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री दुलालले जेष्ठनागरिकको सम्मान तथा संरक्षण सन्नततीको दायित्व भएकाले यसलाई कसैले भुल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
रासम लाग्यो बजार सफाई अभियानमा, नगरप्रमुख सहित् स्थानीय व्यापारीको समेत सक्रिय सहभागिता
जनता भ्वाइस calendar_today १० असोज २०७७, 2:36 am
असोज १० । सविना कार्की
रामेछापका सहयोगी मन (रासम) मन्थली बजार सरसफाई कार्यमा लागेको छ । समाजसेवाको भावनाले भरिएका रासम सदस्यहरुले लकडाउनको सुरुआती दिनहरुमा सुकाजोर बगरमा रहेको बिटार पार्क सजाउनेदेखि लिएर फुडबैंक संचालनदेखि अहिले मन्थली बजार सरसफाईमा लागेको हो ।
तस्वीर : रासम लगायत स्थानीय व्यवसायी बजार सफाइ अभियानमा । जनता भ्वाइस
आज बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको बजार सफाई अभियानले ९ बजेसम्म निरन्तरता पाउने छ । मन्थली नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेत सहित् रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीनकुमार थापा मगर, स्थानीय व्यवसायी सबैको उत्साहजनक सहभागीता रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा मन्थली बजारमा बढ्दै गएको सडक नालाको फोहोर प्रति कसैको चासो नदेखिएको र बेलाबेलामा यस बारेमा प्रश्न उठ्न थालेपछि रामेछापका सहयोगी मन जुर्मुराएको रासम सदस्य सुनिल रायमाझीले जनता भ्वाइसलाई जानकारी दिए ।
रासमले आजबाट सुरु गरेको बजार सरसफाई अभियान सप्ताहव्यापी चल्ने रामसले जानकारी दिएको छ ।
बाल निबन्ध प्रतियोगिता निबन्ध पठाउने समय थप, कहिलेसम्मका लागि थप भयो ? हेर्नुहोस् (सूचना सहित्)
जनता भ्वाइस calendar_today ७ असोज २०७७, 8:47 am
असोज ०७ । जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप ।
जनता भ्वाइस डट्कमले आयोजना गरेको विश्वस्तरीय बाल निबन्ध प्रतियोगिता –२०७७ को समय थप गरिएको छ ।
यस अघि भदौ २१ गते जनता भ्वाइसले एक सूचना प्रकाशन गर्दै कोरोना भाइरसले शिक्षामा पारेको प्रभाव लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित समग्रमा शिक्षा सम्बन्धी बाल निबन्ध प्रतियोगिता पठाउन सूचना गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण केही दिन अघिदेखि मात्रै वैकल्पिक सिकाई केन्द्र मार्फत् शिक्षण सिकाईमा विद्यालय र विद्यार्थीहरु सहभागी भएसँगै प्रतियोगिताको जानकारी विद्यार्थी तहसम्म पुगेकोले सबै विद्यार्थीलाई समेट्नका लागि आगामी असोज २२ गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको हो ।
थप गरिएको समयसीमा अनुसार आगामी असोज २२ गते रातको १२ बजेसम्म विद्यालयतहका बालबालिकाहरु (कक्षा १ देखि १२) ले सहभागिता जनाउन पाउने छन् । प्रतियोगिताको अन्तिम मूल्याङ्कनको नतिजा आगामी कार्तिक २ गते सार्वजनिक गरिने जनता भ्वाइसका अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
नागरिकको याे समस्याको समाधान कहिले हुने भन्ने बारे उहाँले बाेल्न चाहनुभएन । यसैगरि तिनपाटन गाउँपालिकाका प्रमुख कर्ण थापाले याे समस्या समाधानमा अाफुहरु लागिरहेको जिकिर गर्नुभयाे । उहाँले यसअघि अवकाे दशैँ सम्ममा गाउँपालिकाभर राष्ट्रियप्रसारण लाइनकाे विधुत् जाेड्ने बताउँदै अाउनुभएक�